Install Bluetooth Adapter on Windows | OS-ụlọ ahịa Blog
Laptọọpụ na-adịghị mgbe niile na-Bluetooth-njikere. Computers enweghị wuru na-Bluetooth ike emekọ Bluetooth wireless ngwaọrụ na-enyemaka nke a obere erite na plọg n'ime a USB n'ọdụ ụgbọ mmiri na kọmputa.
Automatic echichi >>>
The ọkwọ ụgbọala maka USB Bluetooth nkwụnye na-kpaliri maka wụnye n'oge echichi. Ọ bụrụ na ị na-ahụ ozugbo na ị na-wụnye na nke mbụ, biko hụ ọ bụla firewall ma ọ bụ antivirus ngwa ndị nwere nkwarụ na-adịghị iwetara ma ọ bụ igbochi echichi. Ị nwere ike nwee firewall ma ọ bụ antivirus ngwa ọzọ ozugbo ọ e arụnyere.
Manual nwụnye >>>
1. Open Device Manager site na-achọ “ihe Njikwa Ngwaọrụ” na mmalite menu ma ọ bụ na-amalite na ihuenyo.
2. Chọpụta USB na ngwaọrụ na Device Manager ndepụta (a n'okpuru ngwaọrụ ndị ọzọ na ngalaba).
Note: The aha nke ngwaọrụ na Atiya ka e gosiri n'okpuru nwere ike ịdị iche.
3. Right pịa na ngwaọrụ na pịa Update Driver Software…
4. Na Update Driver Software, Ọkachamara pịa Chọgharịa m na kọmputa maka ọkwọ ụgbọala software.
5. Pịa Ka m ẹsio a ndepụta ngwaọrụ ọkwọ ụgbọala na kọmputa m.
6. Họrọ Gosi All Devices na pịa Next. Pịa na Nwere Njìàrụọrụ… button.
7. Pịa Chọgharịa na ịnyagharịa ka ụgbọala na nchekwa na echichi directory. site ndabere, ọnọdụ bụ: “C:\_Program Files (x86)…
8. Ị nwere ike ịnweta ihe Update Driver Warning dialog na-ekwu na aka itinye a ọkwọ ụgbọala nwere ike ime ka ngwaọrụ kwụsị arụ ọrụ. Pịa Ee ịnọgide.
9. The ọkachamara ga-etinye ọhụrụ ọkwọ ụgbọala na-akọ ihe ịga nke ọma. Pịa Nso mezue wizard.
Bluetooth ọkwọ ụgbọala windo XP >>>
1.Nkwụnye ahụ Bluetooth nkwụnye n'ime kọmputa USB n'ọdụ ụgbọ mmiri
2. The Driver Nwụnye Wizard egosi. Soro nzọụkwụ n'okpuru. Chọgharịa na-ahọrọ directory ebe ọkwọ ụgbọala na-emi odude.
Bluetooth ọkwọ ụgbọala windo 8 >>>
1. nkwụnye ahụ Bluetooth nkwụnye n'ime kọmputa si USB n'ọdụ ụgbọ mmiri
2. Wụnye a ọkwọ ụgbọala na usoro
2.1 The usoro ga-wụnye a ọkwọ ụgbọala ruo mgbe ọkwọ ụgbọala echichi bụ ihe ịga nke ọma
Pịa Malite -> Computer Ntọala -> Control Panel -> Ngwaọrụ na-ebi akwụkwọ. Lee akara ngosi n'okpuru, nke pụtara na ọ unen.
2.2 Ọ bụrụ na onye na-akwọ ada ada na-wụnye na-akpaghị aka
Pịa Malite -> Computer Ntọala -> Control Panel -> Ngwaọrụ na-ebi akwụkwọ na-ahụ icon n'okpuru
Ugboro abụọ click na-amaghị ngwaọrụ, họrọ: Hardware, click: Properties
Họrọ: Driver, click: update Driver
Họrọ: Chọgharịa gị na kọmputa maka a ọkwọ software
Chọgharịa, họrọ nchekwa ebe ọkwọ ụgbọala na-emi odude, na pịa: Osote
Dechara nwụnye 'n'isi’ >>>
Pịa “imecha” button mgbe echichi dechara. Malitegharịa ekwentị ahụ na kọmputa ma ọ bụrụ na kpaliri. A Bluetooth icon na-egosi na ngosi nke ebe desktọọpụ dị na ala-ekpe n'akụkụ ihuenyo. Bluetooth Njikọta ugbu a nyeere na gị na laptọọpụ.
Right-pịa “Bluetooth” akara ma họrọ nhọrọ ejikọ ọzọ Bluetooth-nyeere ngwaọrụ, inyocha dị Bluetooth njikọ, hazi nkwụnye ma ọ bụ kwụsị ngwaọrụ Bluetooth.
More Tech-ozi, Pịa ebe a
processor 64-bit Windows Public Nzube OS-ụlọ ahịa ọkwọ ụgbọala nkwado HTC processors Series Driver Support Intel ihe Njikwa Ngwaọrụ HD Graphics ngwaọrụ Model iwu nkọwa Samsung CPU Nokia Technology_Internet Technology Ekwentị mkpanaka software
HTC Intel Server Series Driver Support iwu nkọwa Technology_Internet 64-bit Windows processor CPU Ekwentị mkpanaka Samsung OS-ụlọ ahịa Sony Ericsson Samsung Galaxy Technology Nokia Intel smartphones Qualcomm processors software ngwaọrụ Model ihe Njikwa Ngwaọrụ HD Graphics Public Nzube ọkwọ ụgbọala nkwado